Bara appaartaayid: Faawundeshiiniin Nelsan Maandeellaa alabichi akka haquu gaafate - BBC News Afaan Oromoo
Bara appaartaayid: Faawundeshiiniin Nelsan Maandeellaa alabichi akka haquu gaafate
1 Bitooteessa 2018
Alabichis taateewwan mormiiwwan kan akka bara 2010 irratti mul'ate ture.
Faawundeeshiniin Nelsan Maandeellaa mana murtii Afriikaa Kibbaa keessaa mallattoo bara appaartaayidii alaabaa biyyattii irraa akka haquuf gaafate.
Faawundeeshinichi mallattoon alaabicharraa kan ''jibbaa, loogii sirrii hintaaneefi miidhaa'' kan aharsiisuudha jechuun mormaa jira.
Itti dabaluunis, alaabichi leellisa yakka namoomaa bulchiinsa warra adii muraasaan lammiilee Afriikaa Kibbaa miliyoonata irratti raawwatame kan leellisuudha, jedheera.
Garuu, muraasni, walabamummaa ofi ibsuu kan daandeessuudha jechuun ariidhaan dubbataniiru.
faawundeeshiniin kunis kan hundeefamee hojii gaarii pirezidaantii Afriikaa Kibbaa kan jalqabaa Nelsan Maandeellaa itti fufiinsuuf jedhutuumetu mana murtii Johaansbargitti argamutti iyyata kan galfate.
Ibsa boromtaa isaa kennameen, tarkaanfiin kuns akka fudhatamuuf kan gaafatame erga alaabaan kun ajjeechaa qonnaan bulaa adii baatii Onkololeessaa keessa raawwatame mormuuf ''Wiixata Gurraachaa'' irratti mul'ateen booda ta'u ibsameera.
Sochiicha aansees marii taasifameenis, ''lammiileen Afriikaa Kibbaa muraasni appaartaayidi yakka namoomaa ta'usaa kan hin fudhanneefi mallattoon kunis fakkeenya appaartaayidi, kan akka alaabaa bara durii yakkaafi miidhamtoota haccuucaa isaa kan leellisu ta'u saan akka hinfudhannee'' ifa ta'eera jedha faawundeshinichi.
Alaabaan kun maaliidha?
Alaabaan haalluu adii, samii fi kelloo bara 928 tti sirna waara adii lakkoofsaan gadaanaa bara appaartaayidii sana bakka bu'uuf dhufe.
Innis alaabaa Mootii Dachi irratti hundaa'uun alaabaawwan Naannoo Bilisa Keelloo, Riippablika Afriikaa Kibbaa fi Gamtaa Biritish, xiqqaa kan hammate ture. Isaanis seenaa kolonii biyyattii kan darbee hunda kan yaadachiisaniidha.
Kunis bara 1994 irraa kaasee alaabaa Afriikaa Kibaatti
Sudaan Kibbaatti qarqaarsi UN dhaabbachuu hordofee beelaan lubbuun namaa darbe
Namni TV irratti sagantaa dhiyeesun beekamu mininsteera muummee Israa'el ta'e
Hiriira mormii bulchiinsa waraanaa Sudaan irratti namoonni sagal ajjeefaman
Komiishiniin UN sarbama mirgoota namoomaa waraana Kaaba Itoophiyaa qoratu gara biyyaa seenuufi
Gaanfa Afrikaatti itti-aanaan ergamaa addaa US aangoo gadhiisan